Giwees - Gino ee Worldwide Event iyo Adeegga Exhibition
Giwees, goobta si aad u hesho dhacdooyinka oo dhan, bandhigyo, bandhige iyo alaab qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
Giwees aad Event & Exhibition Directory
Raadi halkan dhan Event iyo Bandhigga Shirkadaha, Shirarka, miyi ah, heshiiyadii, Events, carwooyin, soo bandhigaa, Shirarka, Products, dabcan siminaaradii, Services, Symposiums, Trade muujinaysaa, Workshops, …
Giwees aad Dhacdooyinka & carwooyin
Gudbi halkan aad Event iyo Bandhigga Shirkadaha, Shirarka, miyi ah, heshiiyadii, Events, carwooyin, soo bandhigaa, Shirarka, Products, dabcan siminaaradii, Services, Symposiums, Trade muujinaysaa, Workshops, …
Giwees aad Company Event & Exhibition
Giwees waa mid ka kaliya ee dunida oo dhan madal dhammaan dadka ka shaqeeya iyo warshadaha dhacdada iyo carwada, soo bandhigo on Giwees shirkadda, haddii ay dhacdo, bandhig, alaabo ama adeegyo ah ee dunida oo dhan.
Kani waa adeeg lacag la’aan ah oo ay bixiyaan Giwees si kor loogu qaado ganacsigaaga on boosteejo ah oo heer qaran iyo heer caalami ah.
Ku biir network Giwees ah!
Giwees waa bulshadaada Qaranka oo dhan iyo International Dhacdooyinka, carwooyin, bandhige iyo Qeeybiyaasha.
Mid ka mid ah meel loogu talagalay oo dhan
Giwees waa advertising madal lacag la’aan u ah shirkadaha ka shaqeeya iyo warshadaha dhacdada iyo carwada.
Giwees waa buugga furan oo dhacdada iyo bandhig shirkadaha, bandhige iyo alaab ay.
Baari dhacdooyinka, bandhigyo, bandhige iyo alaab meesha aad degan tahay si sahlan oo dhakhso.
Baahinta for free
Giwees daabacaa aad dhacdo, bandhig, alaabo ama adeegyo lacag la’aan ah, inaad la qabsato kartaa shirkadda daganaansho oo waqti kasta iyo sida ugu badan ee aad jeceshahay.
Dhacdooyinka Search, bandhigyo, bandhige iyo alaab in ka badan 100 wadan oo dunida ah.
In English iyo luuqado deegaanka
Kor aad dhacdo, bandhig, alaabo ama adeegyo ah ee Ingiriiska iyo in aad luuqada maxaliga ah.
ContactHelo shaarbo Ying daruuro vith